Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo – Axadle
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaysa wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda maanta oo Axad ah:
Lyon ayaa dalbanaysa in £46 milyan oo Gini ay miiska soo saarto Arsenal oo doonaysa kubbad-sameeyaha Faransiiska ah ee Houssem Aouard oo 22 jir ah, laakiin Gunners ayaa la shir tagtay £32.8 milyan Gini oo kaliya. (RMC)
Arsenal waxay diyaar u tahay inay kordhiso lacagta ay ku doonayso Houssem Aouard kaddib markii ay Lyon kasoo diidday £36.5 milyan Gini oo ay ku dalbadeen, waxayna hadda ku darayaan £9 milyan oo kale oo ay lacagta hore ku kordhinayaan. (Football London)
Chelsea ayaa dalab rasmi ah ka gudbinaysa laacibka khadka dhexe uga ciyaara West Ham ee Declan Rice, waxaana la rumaysan yahay inay diyaarisay £40 milyan oo Gini, xilli ay West Ham lacag la’aan ka cabanayso. (Sun)
West Ham ayaa dhinaceeda ka doonaysa Chelsea inay amaah ku siiyaan difaaca reer Germany ee Antonio Rudiger oo 27 jir ah. (Sun)
Burley ayaa ku raad-joogta khadka dhexe ee kooxda Celtic ee Ryan Christie, waxaanay diyaarinaysaa dalab rasmi ah xilli uu suuqa iibka ciyaartoydu dhamaad ku dhow yahay. (Mail)
Barcelona waxay iska diidday dalab 125 milyan oo Euro xambaarsanaa oo laga soo gudbiyey laacibkooda 7 jirka ah ee Ansu Fati, waxaanay lacagtaasi noqonaysay 150 milyan marka lagu daro 25 milyan oo Euro oo ay kooxda dalabka soo gudbisay ay sannadaha dambe bixin lahayd. (Marca)
Torino ayaa iskaga talo baxday Luca Torreira oo ay doonayeen inay kala soo wareegaan Arsenal, waxaase wali xiisaynaysa laacibka reer Uruguay kooxda reer Spain ee Atletico Madrid oo amaah ku doonaysa, balse Gunners ayaa rabta in 24 jirkan ay si rasmi ah u iibiso. (Football Insider)
Manchester United ayaa wali ku jirta raacdada difaaca bidix ee reer Brazil ee Alex Telles, waxaana la rumaysan yahay inay ku kalsoon tahay inay 26 jirkan kala soo wareegi doonto FC Porto. (Star)
United waxay ku biirtay tartanka loogu jiro 16 jirka reer Argentina ee Alex Luno oo u ciyaara kooxda Atletico Rafaela ee dalkiisa ka dhisan, waxaana kula tartamaysa AC Milan, inkasta oo aanu laacibkani sharciyan iman karin Yurub inta ka horreysa sannadka 2022. (Mirror)
Inter Milan ayaa diyaar u ah inay Chelsea u bandhigto difaaca reer Slovakia ee Milan Ksriniar oo 25 jir ah iyo laacibka khadka dhexe ee reer Croatia ee Marcelo Brozovic oo 27 jir ah, si Blues ay ugala soo wareegaan N’Golo Kante. (90min)
20 jirka weerarka uga ciyaara Liverpool ee Rhian Brewster ayaa doonaya inuu la hadlo Crystal Palace oo ku doonaysa £20 milyan oo Gini, inkasta oo ay iyaguna xiisaynayaan Sheffield United iyo Aston Villa. (Sun)
Udinese ayaa u sheegtay Leeds United in kaliya ay aqbali doonaan in £40 milyan oo Gini ay ku fasaxaan laacibkooda khadka dhexe ee Rodrigo de Paul oo 26 jir ah. (90 min)
Manchester City waxay diyaarinaysaa inay heshiis cusub ka saxeexdo laacibka khadka dhexe ee Phil Foden, waxaanu heshiiskaasi sare u qaadi doonaa mushaharka 20 jirkan oo hadda ah £30,000 Gini usbuucii, waxaanu gaadhsiin doonaa £150,000 Gini. (90 min)
Liverpool ayaa wada-hadallo la leh difaaca kooxda Motherwell ee Sam Campbell, kaddib markii ay kooxaha Leeds United iyo Brighton wada-hadal lasii bilaabeen 16 jirkan. (Football Insider)
Laacibka khadka dhexe ee kooxda Rennes ee Eduardo Camavinga oo bishii hore xulka qaranka France u saftay isagoo 7 jir ah, ayaa doonaya inuu sugo illaa July 2021 si uu ugu biiro Real Madrid, iyadoo ay waqti horeba kooxda reer Spain la xidhiidhay da’yarkan. (Marca)
Real Madrid waxay doonaysaa inay amaah sannad ah ku dirto weeraryahanka Luka Jovic laakiin naadigiisii hore ee Eintracht Frankfurt ayaa caddaysay in aanay 22 jirkan reer Serbia amaah kusoo qaadan doonin. (AS)
The United States’ commitment to the Sahel remains intact, Washington says